रासायनिक मल वा जैविक विषादीको समग्र व्यवस्थापन : RajdhaniDaily.com
Homeबिचाररासायनिक मल वा जैविक विषादीको समग्र व्यवस्थापन
डा. सुमनकुमार रेग्मी,
देशले कृषिजन्य वस्तु बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार पर्याप्त मल तथा अरू रासायनिक पदार्थ पर्याप्त वितरण गर्न सकेको देखिँदैन । भनिन्छ, कृषिको अत्यधिक उत्पादनका लागि वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल आवश्यकता परेको देखिन्छ । तर, ४ देखि ५ लाख टन मल वितरण गर्न सके अभाव हुँदैन भनिन्छ । विगत पाँच वर्षमा हेर्दा कुनै पनि वर्ष ४ लाख टन मल पनि वितरण भएको देखिँदैन । नेपालका केही जिल्लामा किसान विभिन्न थरीका मौसमी वनस्पतिको प्रयोगबाट बालीनालीका लागि प्रांगारिक जैविक विषादी उत्पादन तथा प्रयोग गर्दै आएका देखिन्छन् । यस्ता वनस्पतिबाट बनाइने जैविक विषादी खेतमा तथा बारीमा हुने बालीमा लाग्ने कीरा मार्न प्रयोग हुँदै आएको अरू जिल्लाका लागि उदाहरणीय हुन गएको छ ।
यस्तो जैविक विषादी बनाउन रासायनिक विषादीभन्दा कम खर्च लाग्ने देखिएको छ । यस्तो जैविक विषादीको प्रयोगले हानि नपुग्ने भनिएको छ । पछिल्ला समय नसर्ने रोगको मुख्य कारणका रूपमा पनि घातक विषादीको प्रयोग भएको भन्ने तथ्य भेटिएपछि किसानले पनि जैविक विषादीको प्रयोग बढाउँदै आएका छन् । विभिन्न अन्न बालीमा पनि रासायनिक मलको सट्टा जैविक मलको प्रयोग बढ्दै आएको छ । जैविक विषादीले तथा मलको प्रयोगबाट अग्र्यानिक बालीनालीको उत्पादन गरी कृषि पर्यटनको अवधारणा बढ्दै गएको देखिन्छ । विभिन्न जिल्लामा रासायनिक मल जस्तै युरिया, डीएपीलगायतका विकल्पमा किसानले कम्पोस्ट तथा प्रागांरिक मल बनाएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । जिल्ला जिल्लाका किसानले रासायनिक मलको प्रयोग घटाएर लगेका छन् ।
रासायनिक मलले माटोको उर्वराशक्ति कम गर्ने, उत्पादन घट्दै गइरहेको, कृषक तथा उपभोक्ताको स्वास्थमा पनि प्रतिकूल असर पारिरहेकाले त्यसलाई निरुत्साहित पार्न सरकारी सहयोगमा प्रागांरिक मल कारखाना खुल्दै आएका छन् । २०६८ सालदेखि देशमा कम परिमाणमा धुलो प्रांगारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन गर्दै आएको भनिए पनि त्यस्ता उत्पादनको प्रयोग भएको खबर देखिँदैन । यसलाई आवश्यक केही सामग्री उपलब्धमा सहयोग गराएको पनि देखिन्छ । कुनै जिल्लामा त किसानले हरियो मल उत्पादन गरी आपूmलाई परिचित गराउँदै आएका छन् । लेग्युमेनेसी परिवारको झारको गिर्खामा राइजोबिम नामक ब्याक्टेरिया हुने र यसले वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन माटोमा सञ्जित गर्ने काम गर्छ । नाइट्रोजनले उत्पादन बढाउन भूमिका खेल्ने कार्य गर्छ ।
सबै प्रदेशमा आयातीत रासायनिक मलको अभाव भएको देखिन्छ । विगत वर्षहरू जस्तै आगामी हरेक वर्ष पनि किसानले बाली लगाउने बेलामा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल पाउन सक्दैनन् । सरकारी निकायहरूमा यस्तो मल मौज्दातमा सकिएपछि अभाव हुने गर्छ । हरेक प्रदेशमा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल बिक्रीवितरण गर्ने जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनीले पाइआएका छन् । मल अभाव बालीका उत्पादन घट्ने गरेको बताइन्छ । कृषकको सहजताका लागि २०७० बाट कृषि सामग्री कम्पनीको मल साल्ट ट्रेडिङले पनि बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
नेपालमा विगत आठ वर्षको अवधिमा ११ अर्ब रुपैयाँ बढीको विषादी आयात भएको छ
गाउँमा मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएका सहकारीहरूले कृषि सामग्री कम्पनीमा धाइरहेका हुन्छन् । सरकारले अर्गानिक खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्ने लक्ष्य राखे पनि बर्सेनि अर्बौं रुपियाँका विषादी मल आयात भएका छन् । आधिकारिक स्रोतअनुसार विगत आठ वर्षको अवधिमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका विषादी आयात भएको छ । जलवायु परिवर्तनले नयाँ कीरा देखिने, विगतमा छरिएका विषादीले कीरामा विषादी पचाउने क्षमता बढनेलगायतका कारण यस्तो मलको आयात बढ्दै आएको देखिन्छ ।
विषादी मुख्यत भारत, चीन, जर्मनीलगायतका देशबाट आयात हुने गर्छ आयातीतमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रका लागि आयात भएको देखिन्छ । विगतमाभन्दा अघिल्ला वर्षमा विषादीको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ । भारतबाट आयात भएको तरकारी र फलपूmलमा विषादी प्रयोग हुँदै आएको छ । भारतबाट आएको तरकारी तथा फलपूmलमा हेर्दा अस्वाभाविक रंग देखिन्छ ।
मल वितरण तथा आयात स्थिति
आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७०÷७१ मा १ अर्ब ७१ करोड, २०७१-७२ मा २ अर्ब १ करोड, २०७२-७३ मा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको विषादी आयात भएको थियो । २०७४ मा २ अर्ब ६१ करोड र २०७४-७५ मा २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको विषादी आयात भएको थियो । २०७५-७६ र २०७६-७७ मा विषादी अस्वाभाविक रूपमा बढी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा २ लाख ३२ हजार ८ सय ७९ टन मल वितरण भएको देखिन्छ । आव २०७१-७२ मा २ लाख ९८ हजार ८ सय ५८ टन, २०७२-७३ मा २ लाख ५८ हजार ७ सय ७९ टन रासायनिक मल वितरण भएको थियो । यस्तै २०७४ मा ३ लाख २८ हजार २ सय १६ टन र २०७४-७५ मा ३ लाख ४८ हजार ७ सय ३४ टन र २०७५-७६ र २०७६-७७ मा त्यस्तै मल वितरण भएको भनिए पनि हरेक वर्ष मलबारे अभाव नै भएको छ ।
नेपालभर वार्षिक ७ लाख ८५ हजार टन रासायनिक मलको आयश्यकता रहेको भनिन्छ । नेपालमा आयात भएको अधिकांश विषादी तरकारी बालीमा प्रयोग भएको बताइन्छ । मल खरिद गर्न हरेक वर्ष अर्बांै रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भनिन्छ । तापनि मल खरिद पर्याप्त मल खरिद हुन नसक्दा २०७५–७६ र २०६÷७७ मा पनि देशमा मलको अभाव भएको देखिन्छ ।
यस्तो मलको अभाव कहिलेसम्म हुने त ? अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ७० र ३० प्रतिशतको कोटामा खरिद र बिक्री गर्दै आएका छन् । तापनि आव २०७५÷७६ र २०७६÷७७ मा नेपालमा क्रमशः १६ अर्ब र १९ अर्बको मलखाद आयात भएको देखिन्छ ।
सुझाव, समस्या तथा निष्कर्ष
मल अभाव हुने तीन कारण औंल्याइएको देखिन्छ । ती कारणहरूमाः सरकारले मल अनुदानमा बिक्री गर्ने हुँदा सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटअनुसार खरिद गर्ने गरिएको छ । त्यसकारण सीमित बजेटका कारण चाहिने जति मल खरिद गर्न सकिएको देखिँदैन् । अर्का कारणमा कमिसनको कारणले सधंै अभाव हुने दखिएको छ । अर्को कारणमा आयात भएको मल बाँड्ने विधि नमिल्दा किसानलाई मर्का पर्छ । तरकारी बालीमा विषादीको प्रयोग नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन् ।
रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न एकीकृत सत्रु जीव व्यवस्थापन अर्थात् आईपीएम पद्धति अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ
दैनिक प्रयोग गरिने तरकारी विषादीयुक्त हुँदा स्वास्थमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ । तरकारी खेतीलाई जिल्लाजिल्लामा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड लिइएको छ । किसानले विषादीलाई औषधिका रूपमा बुझ्नु र देखासिखी गर्नुले पनि विषादी प्रयोग बढदो छ । रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न एकीकृत सत्रु जीव व्यवस्थापन अर्थात् आईपीएम पद्धति अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । तर, किसानले विषादीको प्रयोगलाई नै बढावा दिई आएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई अर्गानिक खेती र नीति तथा कार्यक्रममा अर्गानिक खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्दै जाने भनिएको छ । सरकारको घोषणापत्रमा १० वर्षभित्रमा देशलाई अर्गानिक बनाउने भनिएको थियो । तर, ११ वर्षमा अर्गानिक बनाउने कार्यको सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । सरकारले आव २०८०÷८१ सम्म धानको उत्पादन बढाएर ६१ लाख ७३ हजार टन, मकै २९ लाख २७ हजार, गहँु २४ लाख २० हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषिजन्य वस्तुका आयात बढेपछि उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको हो । उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखे पनि पर्याप्त मल वितरण गर्न सकिएको छैन् । समयमा नै मल वितरण नहुँदा किसानहरू सधैं मर्कामा पर्दै आएका छन् । मल अभाव हुँदा समयमा नै उत्पादन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन ।
टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा करिब वर्ष दिन लाग्छ । समयमा नै खरिद हुन नसक्दा वितरणमा पनि कठिनाइ हुँदै आएको देखिन्छ । जिल्लामा गठित मल आपूर्ति तथा समिति निष्क्रिय भएपछि प्रत्येक वर्ष मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ । २०७४ सम्म मल आपूर्ति तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा मल ढुवानी तथा बिक्री हुँदै आएको थियो । खाद्यान्न तथा तरकारी र फलपूmलमा प्रयोग हुने विषादीको अवस्था, विषादीको प्रयोग अवस्था, नियमन नियन्त्रण, गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकारले गरेको कार्य, कानुनी जटिलता आदिबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहिआएको छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष ४ करोड मानिसमा कुनै न कुनै रूपमा विषादीले असर पर्दै आएको छ । नेपालमा २०७२÷७३ मा मात्र ५५ करोड मूल्यको ४ सय ५५ टन खास विष विषादी आायात भएको थियो ।
आव २०७५-७६ र २०७६-७७ मा मात्र सबै प्रकारका रासायनिक पदार्थ १२ देखि १४ अर्बको आयात भएको छ । हरेक वर्ष रासायनिक मलको माग र आपूर्तिलगायतका विषयमा समस्या तथा गुनासो उठ्दै आएकाले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले अध्यययन गर्न उपसमिति केही वर्ष अघि बनाएको थियो । यस उपसमितिको जिम्मेवारीमा रासायनिक मलको आपूर्ति प्रणाली, गुणस्तर प्रयोगको अवस्था तथा आवश्यकता, अनुदान नीति, गोदाम घरको अवस्था, किसान पहँुचको, मल वितरणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता, रासायनिक मल कारखाना आवश्यकता र स्थापना गर्न सरकारले गरेको प्रयास मुख्य छन् । यसले नेपालमा प्रयोगमा भइरहेको प्रांगारिक मल र गड्यौला मलको उत्पादन तथा प्रयोग अवस्थाबारे अध्ययन क्षेत्र तोकिएको थियो ।
नेपालमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमध्ये आधाभन्दा बढी भारतबाट हुँदै आएको छ । सरकारले भारतबाट जीटुजी र चीनबाट ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया बेलाबेलामा ढिलाइ हुँदा मलको अभाव हुँदै आएको छ । मल समयमा नै नआएपछि सबै प्रदेशमा मलको अभाव हुने गरेको देखिन्छ ।
डा. सुमनकुमार रेग्मी - July 31, 2021
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि ‘गठबन्धन दलमा कसलाई मन्त्री बनाउने ?’ भन्ने विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन...
२०७४ फाल्गुन २० देखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धनको मूल्य नबढे पनि भारतबाट आएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोल, मट्टीतेल र डिजेलमा भाउ बढाएको थियो । बाह्य बजारमा तेलको...
कोरोना हटस्पट बनेको बाँके जिल्लाभरी सोमबारदेखि निषेधाज्ञा
सर्लाहीमा कोरोना संक्रमणबाट थप १ जनाको मृत्यु
‘सीजी टेलिकमलाई उपलब्ध गराएको अनुदानको हिसाब–किताब हुन्छ’
जव घरबेटीले लकडाउनमा डेरा छोड्ने आदेश दिए
बाहिरी आवागमन पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्ने निर्णय
डा. सुमनकुमार रेग्मी - July 28, 2021
कोरोना संक्रमण दर बढ्दै
दीपक ओली - July 26, 2021